Ihowuliseyili i-Electric Silicone engenaManzi i-USB egcwalisekayo yokuCoca ubuso beBrashi kunye noMthengisi | Enimei
Umbane weSilicone oManzi oSebenzayo oSebenzayo oSebenzayo oCoca ubuso oCoca iBrashi
1. Isirabha esingaphandle esicocekileyo seHyrienicic Silicone sibonelela ngeyona ndawo ithambileyo kunye neyona indalo yokuhlamba ubuso kunye nokuthambisa kuzo zonke iintlobo zolusu eziqhelekileyo.
2.Fumana ukuzithemba okucacileyo ebusweni bakho ngombala otyebileyo, ogudileyo, osempilweni, okhazimla ngakumbi. Susa ngobunono ukwenziwa okuzinzileyo, pores ecocekileyo enzulu, ukunciphisa iintloko ezimnyama ngamandla apheleleyo kunye nomzamo omncinci ukuze ukhanye kakuhle ngolusu olutsha.
3. Ubume be-oval, isitayile esiluncedo esenza kube lula ukuphatha nokuphatha ukuhambisa. Ukucoca ubuso ngeyunithi elula yokubamba ngesandla, awusoze ufune ukutshintsha intloko yebrashi. Izixhobo zokutshaja ngobuchule. Umrhumo opheleleyo ziiyure ezi-3 kwaye unokusetyenziswa amaxesha angama-200.
4. Le mveliso yi-IPX7 engenamanzi, inokusetyenziselwa ishawa kunye nebhafu.
1. Ukunciphisa imibimbi
2. Ulusu oluthambileyo nolusempilweni
3. Ukuphulula umyalezo okwenza ukuphela kosuku lwakho lokuphumla.
4. Ukukhupha ulusu olufileyo ukuveza ukukhanya kobutsha ngaphantsi.
Ukukhawuleza ngokukhawuleza kunye nolusu oluthambileyo
Akukho monakalo kulusu, akukho monakalo kulusu
Kwaye isandla sogwebu?
Zonke - ngeenxa zonke ukucoca, ukuphucula isilungiseleli seglosi
Ukukhupha ioyile eqinileyo
Isicoci, isicoci, icocekile
Ukucoca ngokufanelekileyo kunye ne-multi-in-one
Sombulula iingxaki zobuso
Isandi sigungqisa uphahla olungangeni manzi
3 iintlobo macaron series
Egqithileyo I-Silicone Shower Brush engenaManzi nge-Handle ende
Okulandelayo: Iziqhamo zemifuno yobuso bemaski yamacwecwe ephepha e-DIY yobuso
collagen peptides kunye nolusu
Ii-collagen peptides zolusu
I-collagen peptides ulusu oluvulekileyo
collagen peptides izibonelelo zolusu
iipilisi ze-collagen zolusu
Isixhobo seComment sokufunxa kulusu
Isixhobo sokuCoca isixhobo sokuCoca ulusu
Isixhobo sokuCoca isixhobo sokuCoca iPore
peptides kunye collagen ulusu
iipilisi ezincinci ze-collagen ezincinci
I-ceramic straightener entsha yeenwele ezimnyama
Iinwele Comb Straightener Izinwele Straightener Electr ...
Ukungcangcazela okungamanzi ngombane weSilicone Shower B ...
Isithambisi sombane esenziwe ngesiseko sebrashi
5 in 1 new curler iinwele curler Electric ha ...
Yobuso blackhead weplishi ezincamathelayo extractor ...